Saafi Films - News: Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo la wareegay deegaanka Xarboole
Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo la wareegay deegaanka Xarboole
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo taageero ka helaya kuwa AMISOM ayaa la wareegay gacan ku heynta deegaanka Xarboole oo ka tirsan gobolka Jubbada hoose, kaddib markii ay halkaas howlgal ka sameeyeen.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay AMISOM in deegaanka laga saaray al-Shabaab ee Xarboole uu 6km u jiro deegaanka Miido oo isna 10 cisho ka hor laga saaray maleeshiyadaas ayaa muhiimad weyn u leh howlgallada ay ciidamada iskaashanaya ay ka wadaa gobolka Jubbada hoose.
War-saxaafadeedka ayaa waxaa kaloo lagu xusay in kooxda al-Shabaab ay hub uga carareen deegaankaas, kuwaasi oo la wareegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isku dhinac ah.
Taliyaha ciidamada AMISOM, General Andrew Gutti ayaa sheegay in qabsashada deegaanka Xarboole ay ku soo aadday xilli dalka uu ku jiro xaalad halis ah, isagoo intaas raaciyay in AMISOM ay sii wadi doonto taageerrada shacabka Soomaaliyeed.
Howlgalka lagu qabtay deegaanka Xarboole ayaa yimid maalin kaddib markii gudaha dalka Soomaaliya ay ka dhacday doorasho madaxweyne oo taariikhi ah.
4,951,030 unique visits